काठमाडौं, २२ असार । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले ‘छौंडाहरुलाई कसैले छाडेको हो कि आफैं चलमलाएका’ भन्दै आक्रामक ट्वीट गरेका छन् । शनिबार संसदीय दलको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना हुनु र भोलिपल्ट विहानै रिमालको......
काठमाडौं, २० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा आइफा अवार्ड गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । अनुकूल समय पारेर सो अवार्ड गरिने उनले बताए । ओलीले आइफा अवार्ड रोक्नका लागि संसदीय समितिले......
काठमाडौं, २० असार । नेपाली कांग्रेस वीपीका सभापति हरिबोल भट्टराईले विदेशीको इसारामा धर्मनिरपेक्षता ल्याएको र यो सरकारले देशको धर्मसंस्कृति मास्न उद्धत रहेको आरोप लगाएका छन् । उनको दलिल छ, ‘राष्ट्र जोगाउन सबै देशभक्तहरु एक......
काठमाडौं, २० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रममा आफूभन्दा पहिले बोल्ने अध्यक्ष प्रचण्डले ‘मेरा त गुरुहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ’ भनेको प्रसंगमा टेकेर ‘डा. बाबुराम भट्टराईमात्रै होइन, उपेन्द्रहरू पनि नेकपा प्रवेश गरे हुन्छ’ भन्ने......
कम्युनिस्टसँग अब लडाइँ सुरु भयोः काँग्रेस नेता रावल
काठमाडौं, २० असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले कम्युनिस्टसँगको लडाइँ सुरु भइसकेको बताएका छन् । ‘कम्युनिस्ट सरकारको लोकतन्त्र विरोधी चरित्रको सुदूरपश्चिम काँग्रेसले लगातार विरोध गरिरहेको......
काठमाडौं, २० असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले केही विधेयक संविधानको मर्मविपरीत ल्याएको ठहर गर्दै सङ्घीय संसद्बाट पारित हुन नदिन सशक्त प्रतिवादका लागि सातै प्रदेशमा सर्कुलर जारी गरेको छ । संविधान प्रतिकूल......
काठमाडौं, १७ असार । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आईफा अवार्ड रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले तत्काल सबै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलका अनुसार सरकारले अवार्ड......
काठमाडौं, १७ असार । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले काठमाडौंमा इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अर्वाड (आइफा) कार्यक्रम भव्य हुने तर्क गरेका छन्। श्रीलंकामा भएको अवार्डले विश्वभरको ध्यान खिचेको र नाफाको व्यापार गरेको......
मन्त्रिमण्डल परिवर्तन अनावश्यक हल्लाः मन्त्री खनाल
रुपन्देही, १७ असार । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले तत्काल मन्त्रिमण्डल परिवर्तन नहुने बताएका छन्। उनले मन्त्रीहरू हेरफेर हुने भनेर अनावश्यक हल्ला फैलाइएको बताएका छन्। बुटवलमा रिपोर्टर्स् क्लबले मंगलबार गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री......
ईश्वर पोखरेलको प्रचण्डलाई चेतावनी, ‘हामी जबज छाड्दैनौं’
विराटनगर, १५ असार । नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भन्ने विषयमा पार्टीलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले......
काठमाडौं, १६ असार । म आज पार्टीभन्दा पनि अहिलेको व्यवस्थाबारे केही कुरा भन्छु। पार्टीबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा गरौंला। मैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन। के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक......
बहुदलीय जनवादका विशेषताभन्दा टाढा जान सकिँदैनः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, १४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिद्धान्तका नाममा गतिहिनता देखाउन उचित नहुने बताएका छन्। जननेता मदन भण्डारीको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले भने ‘कुनै सिद्धान्तमा अनुचित ढंगले टाँस्सिने, सिद्धान्तका......
मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउन ढिलो गर्नेहरु छन्ः अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं, १४ असार । स्वर्गीय मदन भण्डारीले प्रतिपादित गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अहिले नेकपाभित्र बहसको विषय बनेको छ। शनिबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले ६८ औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा जबज......
पहिलो पटक ‘एकै परराष्ट्र नीति’ बनाउन सरकारी स्तर जुट्यो
काठमाडौं, १४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै राजनीतिक दलहरुको परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार पहिलो पटक आयोजना गरेको ‘परराष्ट्र निति राष्ट्रिय संम्वाद’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र नीतिको......
देशमा रहेको माफियाको सफाइ जरूरी रहेको सभामुख महराको धारणा
काठमाडौं, १४ असार । सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजनीतिमा सफाइ जरुरी रहेको बताएका छन्। हनुमन्ते सफाइ अभियानको ७० औं हप्ताको अवसरमा सूर्यविनायक नगरपालिका –४ दधिकोटस्थित दक्षिण बाराही उद्यान सामुदायिक वनमा आज आयोजना गरिएको राष्ट्रिय......
मन्त्री बिना मगरलाई आफ्नै गाउँमा कालोझण्डा
काठमाडौं, ११ असार । खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई आफ्नै गाउँमा कालो झण्डा देखाइएको छ । पुनर्वास नगरपालिका भवन उद्घाटनका लागि जाने क्रममा मन्त्री मगरविरुद्ध काँग्रेस कार्यकर्ताले स्थानीय डोके बजार क्षेत्रमा कालो झण्डा देखाएका हुन्......